Amehlo abheke izintwana kowezikebhe | News24
LAST UPDATED: 2018-10-24, 06:39
Amehlo abheke izintwana kowezikebhe
Isithombe: SithunyelweAbanye abazobe bethwelwe ngeqoma kulesigaba seminyaka (U23) u-Stewart Little (phambili) no Khumbulani Nzimande.
ISIKHATHI esiningi amehlo abalandeli bomjaho wezikebhe waminyaka yonke i-FNB Dusi Canoe Marathon ivamise
ukugxila kubantu abadala kuphela noma ezinsepheni ezaziwayo, kodwa kulonyaka ka-2018 umdlandla nentshisekelo izobe ikhona nasezifanyaneni ezincane ezingaphansi kweminyaka engamashumi amabili nantathu (U23).
Ngendlela izinto ezimi ngayo kuyacaca ukuthi kulabafanyana kuyobe kudlana imilala futhi bazoheha amehlo abaningi.
Lomdlalo wokugudla ngezikebhe kusukwa eMgungundlovu kuze kuyoqedwa eThekwini uhlelelwe ukuthi uqale ngomhlaka February 15 kuya ku February 17.
Okubuye kulethe enkulu intshisekelo mhlawumbe nokukhathazeka kwezinye izinsephe ezingosaziwayo ukuthi lezizifanyana zingagcina ziwudlile umhlanganiso jikelele nokuchaza ukuba wuhlupho kumasiniya.
Okubuye kube mnandi ukuthi isizukulwane esisha sabafanyana abakade bengaziwa sebeqala ukubonakala manje futhi ababa wuhlupho emiklomelweni noma babe kwabakuqala abayishumi abangenile.
Abanye abazobe bethwelwe ngeqoma kulesigaba seminyaka (U23) u-Stewart Little no Khumbulani Nzimande.
Vele sebedume ngokwenza ezibukwayo labagwedli, khona maduze nje bebeqaliswe phambili eqoqweni labashesha kakhulu emdlalweni we 50 Miler Canoe Marathon. Lesisenzo nje sisodwa kuchaza ukuthi labafana bezobe bebhekwe ngabomvu emdlalweni walonyaka wodumo i-2018 FNB Dusi Canoe Marathon.
“Bekungelula khona ukuzilolonga ngendlela esiyithandayo
Sinophathina wami. Phela mina ngizinze e-Underberg kanti uKhumbulani uhlala ngase Nagle Dam. Kodwa ngiyajabula nje ukuthi sikwazile ukuba namasontshwana agcwele sizilolonga ndawonye nokwenze sazana kakhulu,” kusho umfana wakwa Little nosafunda e-Varsity College. Labagwedli bobabili abaxhaswe u-Euro Steel bazi kahle ukuthi insimbi izobe ishisa ngoba phela baningi abasafufusa ukudla ubhedu. Abanye futhi abafana abathwele ngqoma yiningi labalandeli balomjaho mhlawumbe nawuMzansi wonke ikakhulu eKwaZulu-Natal oMthobisi Cele noMpilo Zondi. Ukuziqeqesha kukaCele noZondi kanye nokudlala ndawonye emijahweni eminingana kucacisa bha ukuthi bayazwana futhi bazana kahle.
“Sizibambe ngakho kanti namalungiselelo ethu ahamba kahle,” kusho uCele.
Labagwedli bazokhunjulwa ngesikhathi bedla umhlanganiso emjahweni i-2017 Non-Stop Dusi nalapho isimo sezulu sasibi ngendlela eyisimanga.
Road name: mM Northbound